Mobil - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉၁၁; ၁၁၀ နှစ် အကြာက (၁၉၁၁) (နယူးယောက်မှ Standard Oil Company အဖြစ်)
၁၉၆၃ (၁၉၆၃) (Mobil အဖြစ် နာမည်ပြောင်း)
Mobil ဆီဆိုင်တစ်ခု၏ ညမြင်ကွင်း
Mobil သည် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ အထင်ကရ စက်ဆီချောဆီကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Exxonကုမ္ပဏီနှင့် လက်တွဲပူးပေါင်း၍ မိခင်ကုမ္ပဏီကြီးအဖြစ် ExxonMobil ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Mobil သည် ၁၉၄၀ နှစ်လည်များဆီမှ ၁၉၇၀ ခုနှစ်များထိ ကမ္ဘာ့ရေနံထုတ်လုပ်ရေးလောကကို အုပ်စိုးချယ်လှယ်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီကြီး ခုနှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
၁ သမိုင်းကြောင်း အကျဉ်းချုပ်
၂ Mobil အမှတ်တံဆိပ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ
၂.၁ Mobil Gasoline (Mobil ဓာတ်ဆီ)
၂.၂ Mobil 1
၂.၃ Mobil Delvac
၂.၄ Mobil Industrial
Mobil ဆီပန့်ဟောင်းတစ်ခုအား မြင်ရစဉ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တစ်ခုမှ Mobilgas ပန့်တစ်ခုအားမြင်ရစဉ်
၁၉၁၁ ခုနှစ်၊ Standard Oilကုမ္ပဏီကြီးပြိုကွဲမှုအပြီးတွင် နယူးယောက်မှ Standard Oil ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် Soconyကို အခြားသော ဆက်ခံသူ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၃၃ ခုနှင့် အတူ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏နာမည်ကို "Mobiloil" ဟူ၍ မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။
၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင် Socony သည် Vacuum Oil ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းလိုက်ပြီး Socony-Vacuum ကို တည်ထောင်လိုက်သည်။
၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် Socony-Vacuum နှင့် Jersey Standard (အင်ဒိုနီးရှားတွင် ရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရေနံချက်စက်များ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ)တို့ ပူးပေါင်း၍ Standard-Vacuum Oil Co. သို့မဟုတ် "Stanvac" ကို တည်ထောင်ပြီး နယူး ဇီလန်၊ တရုတ်နှင့် အရှေ့အာဖရိကဒေသများအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်တွင် လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။
၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် Socony-Vacuum သည် Socony Mobil Oil ကုမ္ပဏီအဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အမှတ်တံဆိပ်အမည်ကို"Mobilgas" ဟူသောအမည်မှနေ၍ ပိုမိုရိုးရှင်းသောအမည်ဖြစ်သည့် "Mobil" သို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်တစ်ရာပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို ကျင်းပသည့် ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏အမည်တွင် "Socony" ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီး Mobil Oil ကုမ္ပဏီဟူ၍ဖြစ်လာသည်။
Mobil Pegasus အမှတ်တံဆိပ်
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် Mobilgas နှင့် Mobilgas Special တို့ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို Mobil Regular နှင့် Mobil Premium အဖြစ် ပြောင်းလဲထုတ်ဝေလိုက်ပြီး အမှတ်တံဆိပ်အမည်ကို မှတ်သားရလွယ်ကူသော "Mobil" အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် Mobil နှင့် Exxon တို့နှစ်ဘက်သဘောတူညီမှုနှင့်အတူ ExxonMobilကုမ္ပဏီကြီးအဖြစ် ပူးပေါင်းလိုက်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပူးပေါင်းမှုဖြစ်စဉ်သည် ၁၉၉၉ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ပြီးမြောက်သည်။
Mobil အမှတ်တံဆိပ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ExxonMobil၏ စက်ဆီချောဆီဆိုင်ရာဌာနကြီး အောက်တွင် Mobil ကို စက်ချောဆီဆိုင်ရာ အဓိကအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်အဖြစ် ဆက်လက်ထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိသည်။ Mobil ထုတ်ကုန်အများစုတွင် အမှတ်အသားအဖြစ် Mobil အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော အတောင်ပံပါသော မြင်းနီ အဿထိုရ်မြင်းကို ထည့်သွင်းဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
Mobil အမှတ်တံဆိပ်သည့် ယနေ့အခါတွင် အိမ်သုံး၊ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်အမျိုးမျိုး၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံအမျိုးမျိုးအပြင်၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာများအပါအဝင် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံအတွက် လိုအပ်သော စက်ဆီချောဆီအမျိုးမျိုးကို ထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိသည်။
Mobil ၏ အဓိက အမှတ်တံဆိပ်ခွဲလေးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ-
Mobil Gasoline (Mobil ဓာတ်ဆီ)[ပြင်ဆင်ရန်]
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - Mobil 1
Mobil 1 သည် Mobiloil အမှတ်တံဆိပ်မှ ဆင်းသက်လာသော နာမည်ကျော် စက်ချောဆီဖြစ်ပြီး ExxonMobil၏ နာမည်အကြီးဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် နှစ်ရာသီသုံး 5W20 စေးပျစ်ကိန်းရှိ အဆင်မြင့် မော်တော်ကား စက်ချောဆီအဖြစ် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဤအမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင် မော်တော်ကား စက်ချောဆီများ၊ ဆီစစ်ဇကာများ၊ အမဲဆီ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီများ နှင့် ဂီယာဆီများရှိသည်။
Mobil Delvac သည် လုပ်ငန်းသုံး ဝန်တင်မော်တော်ယာဉ်ကြီးများတွင် သုံးစွဲနိုင်သည့် စက်ဆီချောဆီအမျိုးအစားများအတွက် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် စက်ချောဆီ၊ ဂီယာဆီနှင့် အမဲဆီများပါဝင်သည်။
Mobil Industrial သည် ExxonMobil၏ အမှတ်တံဆိပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် သုံးစွဲသည့် စက်ဆီချောဆီအမျိုးအစားများအတွက် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ အဓိက ထုတ်ကုန်များမှာ Mobil SHC synthetic ဆီများနှင့် Mobil Grease အမဲဆီများဖြစ်သည်။
↑ "Business & Finance: Socony-Vacuum Corp." Archived 12 August 2013 at the Wayback Machine. Time, 1931-08-10, retrieved on 2009-12-10.
↑ ExxonMobil Press Release။ ExxonMobil.com။ 27 January 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2012-04-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lubricants။ Mobil.com။ 2012-04-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mobil 1™ and Mobil Super™ motor oil and synthetic motor oil | Mobil™ Motor Oils
↑ Lubricants။ ExxonMobil။ 2012-04-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mobil Industrial website။ MobilIndustrial.com။ 2012-04-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons တွင် Mobil နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobil&oldid=674365" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၆:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။